नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : मस्यौदा संविधानमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यको कुल सङ्ख्या ८७० प्रस्ताव ! चार दलका चार नेता ज्यूहरु, नेपालमा ८ प्रदेश, सबै गरी ८७० संसद सदस्य अली कम भयो कि ?? त्यतिका दललाई भाग बिलो पुग्लार त्यतिले ?? बढाउने हो कि ??!!
मस्यौदा संविधानमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यको कुल सङ्ख्या ८७० प्रस्ताव ! चार दलका चार नेता ज्यूहरु, नेपालमा ८ प्रदेश, सबै गरी ८७० संसद सदस्य अली कम भयो कि ?? त्यतिका दललाई भाग बिलो पुग्लार त्यतिले ?? बढाउने हो कि ??!!
मस्यौदा संविधानमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यको कुल सङ्ख्या ८७० प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्थायी सदनका रुपमा राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरिएको छ । सभामा ४५ सदस्य हुनेछन् । यसमध्ये पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचितको गोलाप्रथाद्वारा एक तिहाइ सांसदको पदावधि दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । अर्का एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल चार वर्षमा र बाँकी एक तिहाइ सदस्यको समय छ वर्षमा सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछिका सांसदको पदावधि छ वर्ष हुनेछ । प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रदेशबाट कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँचजनाका दरले निर्वाचित ४० जना सदस्य राष्ट्रियसभामा हुनेछन् । त्यसैगरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत
कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँचजना सदस्य हुने व्यवस्था छ ।